Ireo ny fifandraisana amin'ny iMac Pro sy ny endriny | Avy amin'ny mac aho
Ireo no fampifandraisan'ny iMac Pro sy ny endriny
Javier Porcar | | iMac, maro
Tamin'ny volana desambra lasa teo, natolotra ny iMac Pro. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia niresaka momba ny singa sy ny zava-bitany izahay. Etsy ankilany, maneho hevitra izahay ny amin'ny fanamorana ny fanoloana azy ireo raha misy fahasimbana na amin'ny fikasana hanolo azy ireo amin'ny hafa mba hahazo tombony bebe kokoa.
Fa ny ampahany tena manandanja, ary izay nanome betsaka horesahina amin'ny fampisehoana ireo Mac farany, dia ny fifandraisana peripheral. Marina fa ny ankamaroan'ny Mac farany dia azo entina ary ao amin'izy ireo dia tsy maintsy voafetra ny fifandraisana, na izany na tsy izany, teboka miverimberina sy manan-danja io rehefa misafidy ny Mac.
Ao amin'ity lahatsoratra ity, Tianay holazaina aminao hoe karazana fifandraisana inona no entin'ny iMac Pro vaovao sy izay azon'izy ireo atao.
Manomboka amin'ny fomban-drazana indrindra ka hatramin'ny fomban-drazana faran'izay kely dia manana isika Jack finday 3.5mm. Ny fifandraisana mahazatra amin'ny headset rehetra. Ny fifandraisana S / PDIF nomerika dia nesorina tamin'ny kinova hafa.
Avy eo dia tonga ny fifandraisana Karatra SD. Tsy vitan'ny fikojakojana azy fotsiny, fa endrika hafa no tohana. manokana, miseho ireo vaovao UHS-II. Ity kinova faharoa an'ny fenitra UHS ity dia ilay fanovana mitovy ihany izay nitondra ny fanovana avy amin'ny USB 2.0 ka hatramin'ny USB 3.0. Haingana kokoa ity fenitra vaovao ity ary mampiasa pin vaovao, fa mitahiry ireo taloha ihany koa. Ny karatra SD USH-II (ary ny karatra UHS-III amin'ny ho avy) dia manana pinina roa, ny valo nentim-paharazana manaraka ny sisiny ambony ary ny valo ao aoriana. Raha teôria dia afaka manolotra hafainganam-pandeha 155MB / s ka hatramin'ny 312MB / s izy ireo, miankina amin'ny kinova.
Manohy ny USB manaraka 3 miaraka amin'ny USB-A, mitovy amin'ny iMac 5k sy seranan-tsambo Thunderbold 3 efatra miaraka amin'ny USB-C.
Miroso amin'ny fifandraisana Ethernet izahay. Ny iMac Pro no Mac voalohany miaraka amin'ny port Nbase-T izay afaka mamindra angona amin'ny 10 Gbps, miaraka amin'ny tariby voafaritra. Androany isika dia tsy afaka manararaotra an'io hafainganam-pandeha io amin'ny fifandraisana ivelany (Internet outlet) fa ao anatiny. Manamboara tambajotra eo an-toerana haingam-pandeha, izay ahafahantsika mampita vaovao eo noho eo. Mifandray amin'ny NAS, hafainganam-pandehan'ny famakiana 330MB / s vakiana ary fanoratana 220MB / s dia azo tratrarina. Hatreto tsy misy solosaina afaka mamindra rakitra amin'ny hafainganam-pandehany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ireo no fampifandraisan'ny iMac Pro sy ny endriny
Jennifer Bailey dia niresaka momba ny Apple Pay sy ny fitomboany tamin'ny taona 2018
Apple dia miasa amin'ny Mac vaovao 3 miaraka amin'ny coprocessors manokana